गृहमन्त्री बादलले प्रहरीलाई दिए यस्तो कडा निर्देशन, क-कसको चल्यो रुवाबासी र भागाभाग ? — Sanchar Kendra
गृहमन्त्री बादलले प्रहरीलाई दिए यस्तो कडा निर्देशन, क-कसको चल्यो रुवाबासी र भागाभाग ?
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले महिला तथा बालिकाउपर हुने हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता अनपाइ त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न तत्वलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । जनताको भरोसा र विश्वास बोकेको सदस्यबाट नै कानून उल्लंघन हुनु क्षम्य नभएकाले बिना हिचकिचावट त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।
गृहमन्त्री थापाले आफ्नो कुशल कार्यसम्पादन मार्फत प्रहरी संगठन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत सक्षम प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै निर्भिक रूपमा कर्तव्य पथमा अघि बढ्न सुझाए । प्रहरी कुनै लोभ लालचमा फसी कार्य गरेमा क्षम्य नहुने चेतावनी पनि उनले दिए । बादलको यस्तो निर्देशनसँगै महिला हिंसा गर्नेहरुको भागाभाग मच्चिन सुरु भएको छ । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई आत्मसात गरी नेपाल प्रहरी संधै लागि पर्ने जानकारी दिए । प्रहरी दिवसकै अवसरमा २९ जना अमर प्रहरीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग र कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
यस्तै कर्तव्य पालनको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका आफ्ना ४३ जना प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले ‘अमर प्रहरी’ घोषणा गरेको छ। शुक्रबार परेको ६३ औं प्रहरी दिवसको दिन पारेर प्रहरीले कामको सिलसिलामा २०५३ सालदेखि २०७६ सालको अवधिमा ज्यान गुमाएका ती प्रहरीहरूलाई ‘अमर प्रहरी’ घोषणा गरेको हो। यसैगरी प्रहरीले यस वर्षको ‘लाईफटाइम अचिभ्मेन्ट’ अवार्ड पूर्व एआइजी यादब अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रहरीको औपचारिक कार्यक्रममा उनलाई अवार्ड प्रदान गरेका छन्। यसैगरी यस वर्षको उत्कृष्ट कार्य सम्पादनतर्फको अवार्ड हाल मोरड प्रहरीमा कार्यरतः एसपी मनोज केसीलाई प्रदान गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा भब्य कार्यक्रम गरी ६४ औं प्रहरी दिवस मनायो। दिवसका अवसर पारेर प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्व एआइजी यादव अधिकारीलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गर्‍यो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व एआइजी अधिकारीलाई अवार्ड प्रदान गरे। अधिकारी २०४३ सालमा इन्सपेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
उनी पूर्व आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालका ब्याची हुन। प्रहरीको इन्सपेक्टर तालिममा उनी त्यसबेला अनुशासन तर्फ उत्कृष्ट भएका थिए। २०४६ सालको आन्दोलनताका उनलाई तत्कालिन प्रहरी नेतृत्वले काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनाएका थिए। जहाँ अप्ठेरो त्यहाँ अधिकारीलाई खटाउने चलन थियो, एक पूर्व प्रहरी कर्मचारीले बताए। आधा दर्जन भन्दा बढी जिल्ला हाँकिसकेका उनी अहिलेका प्रहरीमध्ये धेरैको ‘गुरु बा’ समेत हुन । प्रहरीमा तालिम दिनेलाई ‘गुरु बा’ भनेर चिनिन्छ ।
उनीसँग प्रहरीका लागि लिइने स्वदेशी र विदेशीको अनुभव छ। तालिममा उनको ब्याचमा उनलाई कसैले पछि मात्र समेत सकेनन । ३० वर्षे जागिरको अवधि उनले न त स्पष्टिकरण खाए न त कसैसँग स्पष्टिकरण नै लिए। डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवामा पछिपरेपछि उनी एकाएक चर्चामा आए। उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजिपी हुदाँ बढुवामा नपरेपछि उनी र अर्यालबीच खटपट भएको थियो। अधिकारीले आफूसँग प्रशस्त अंक हुदाँ पनि जुनियरलाई बढुवा दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। बढुवा हुन पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्बोच्चले बढुवाका लागि उनलाई बाटो दियो । सरकार पनि बाध्य भयो ।
त्यसपछि उनले एआइजीको फुली लगाउन पाएका थिए। अवकाश पछि पनि उनी प्रहरीसँग निरन्तर जोडिरहेका छन् । हाल एउटा संस्था खोलेर अधिकारीले प्रहरी एकेडेमीसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । उनले नेपाल प्रहरीको तालिम कसरी ‘एडभान्स’ बनाउन सकिन्छ भनेर रिसर्च गरी कामहरु अघि बढाएका छन् ।
प्रदेश प्रहरीलाई संघले भन्दा बढी सुविधा दिन्छौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश प्रहरी बनेपछि प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउने बताएका छन् । प्रहरी संरचना केन्द्रबाट प्रादेशिक संरचनामा जाँदा के होला भन्ने कौतुहलता प्रहरीभित्र रहेको भन्दै उनले केन्द्र सरकारले भन्दा बढी सेवा सुविधा दिने बताएका हुन् ।
‘प्रादेशिक संरचनामा जाँदा के होला भन्ने कौतुहलता देखिन्छ तर सेवा, सुविधा र संरक्षण संघ भन्दा कम हुने छैन बरु बढी नै बनाइने छ’ ६४ औं प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रदेश ५ प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवलमा आयोजित समारोहलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ‘यसमा प्रदेश सरकार कटिवद्ध छ, कुनै आशंका पाल्न आवश्यक छैन ।’
उनले प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतसम्मलाई दिइंदै आएको नगद पुरस्कारसमेत अहिले ज्यादै कम भएको औंल्याउंदै प्रदेश मातहत आएपछि पुरस्कार राशी पनि बढाइने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्को वर्षको वजेटमै प्रहरी दिवसका अवसरमा दिइने नगद पुरस्कारका लागि सम्मानजनक रकम छुट्टाइने आश्वासनसमेत दिए ।
प्रहरी संगठनमा चेन अफ कमाण्ड फितलो हुनु मुख्य चुनौती रहेको औंल्याउंदै उनले एकीकृत नेतृत्व प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरामा प्रहरी नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सिंगो प्रहरी संगठनलाई एकीकृत कमाण्डमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन, यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो’ मुख्यमन्त्रीले भने ‘अधिकृत र जवानबीच आत्मीय सम्बन्ध नहुनु अनि पारदर्शिता र सुशासनमा पनि अलिकति समस्या छ ।’
उनले समाजको विकाससंगै सुरक्षा चुनौती समेत थपिएको औंल्याउंदै चुनौतीको बिश्लेषण गरेर सुरक्षा योजना बनाउन सुझाव दिए । प्रहरीको क्षमता बढाउन तालिम केन्द्रलाई प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुल प्रसाद केसीले शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्यले प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका मुख्य भागमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्ने कामको थालनी भइसकेको बताए ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक राजेशनाथ बास्तोला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्य, प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मधुसुदन लुइटेललगायत प्रहरी जवानसम्मका १४ जनालाई नगद सहित पुरस्कृत गरिएको छ । पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णबहादुर थापासहित समाजसेवीहरु ओमकार गौचन, चन्द्रमणि अधिकारी, कृष्णप्रसाद शर्मा, पत्रकार माधव ढुंगानालगायतलाई सम्मान गरिएको छ ।